2019 – Gaming Noodle
Esports Award 2019 မှာ ဘယျသူတှကေ ဘာဆုတှရေရှိသှားကွလဲ?
[Unicode] Esports Award 2019 မှာ ဘယျသူတှကေ ဘာဆုတှရေရှိသှားကွလဲ? 2017 ကတညျးက စတငျခဲ့တဲ့ Esports နှငျ့ သကျဆိုငျသော ပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ အသငျးအဖှဲ့တှကေို ပေးအပျတဲ့ Esports Award ရဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ ဆုပေးပှဲကိုတော့ နိုဝငျဘာ ၁၆ မှာ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ။ USA. Atlanta မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ Esports Award 2019 မှာတော့ ဆုပေါငျး ၂၇ ဆုပေးအပျခဲ့ပွီး ဆုရရှိသှားသူအခြို့ကို အောကျမှာ ဖျောပွပေးထားပါတယျ။ မဲပေးတဲ့စနဈကတော့ ပထမအဆငျ့အနဇေကာတငျစာရငျးမှာ ပါဝငျဖို့ အဆိုပွုရပါတယျ။ ဆုတှကေိုတော့ Community, Industry နဲ့ Pro ဆိုပွီး ၃ ဆုခှဲခွားထားပါတယျ။ ဒုတိယအဆငျ့မှာတော့ နောကျဆုံး …
Esports Award 2019 မှာ ဘယျသူတှကေ ဘာဆုတှရေရှိသှားကွလဲ? Read More »
၂၀၁၉ အတွင်း ထွက်ရှိလာဦးမည့် ကောင်းနိုးရာရာ PC Game များ (Part-1)
[ZawGyi] ၂၀၁၉ အတွင်း ထွက်ရှိလာဦးမည့် ကောင်းနိုးရာရာ PC game များ (Part-1) ၂၀၁၉ ခုနှစ်ဟာ မကြာသေးမီက နှစ်တစ်ဝက် ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်အတွင်း ထွက်ရှိမယ်လို့ ကြေငြာထားခဲ့တဲ့ ဂိမ်းများကတော့ ကျန်ရှိဆဲပါ။ ထိုဂိမ်းများထဲမှာမှ PC game များဟာ console သက်သက်ဝယ်ယူရန် မလိုဘဲ အဆင်ပြေစွာ ကစားနိုင်ခြင်း၊ online ချိတ်ဆက် ကစားရန် လွယ်ကူခြင်း၊ အများစုမှာ free ဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူကစားရသည့် ဂိမ်းများမှာလည်း ဈေးနှုန်းသက်သာလေ့ရှိခြင်း စတဲ့ အားသာချက်ကြောင့် gamer အများက သဘောကျနှစ်ခြိုက်ကြပါတယ်။ ယခုဂိမ်းများကတော့ ထွက်ရှိလာမယ့်အထဲက PC gamer တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို အများဆုံးခံရတဲ့ ဂိမ်းတွေပါ။ “Doom Eternal” …
၂၀၁၉ အတွင်း ထွက်ရှိလာဦးမည့် ကောင်းနိုးရာရာ PC Game များ (Part-1) Read More »